Misa Zimbabwe Inotambira neMufaro Kudomwa kwaVaParadza seMutevedzeri weGurukota reKuburitswa kweMashoko
Sangano re Media Institute of Southern Africa-Zimbabwe (Misa-Zimbabwe) rinoti nhengo dzaro dziri kufara zvikuru nekudomwa kwemutori wenhau, uye vari nhengo yeZanu PF inomirira Makonde muparamende, VaKindness Paradza, semutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko.
VaParadza vakadomwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vave mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vachitora basa rakasiiwa naVaEnergy Mutodi.
Sachigaro we Misa Zimbabwe, VaGolden Maunganidze, vaudza Studio 7 kuti VaParadza ndisahwira wevatori venhau anonzwisisa zvese zvinovanetsa sezvo ivo vakashanda kwenguva refu semutori wenhau.
VaMaunganidze vanoti sangano ravo riri kutarisira kuenderera mberi richishanda zvakanaka naVaParadza.
Avo vange vari sachigaro we MISA ZIMBABWE, VaGolden Maunganidze, vari parunhare ku Harare ne Studio 7.
Zvichakadaro, VaParadza, avo vakamboita munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, vaudza Studio 7 kuti vanotenda mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nekuvapa mukana wekushanda munhandare yavanoziva kwemakore mazhinji.
VaParadza vanoti vakaenda kuchikoro nevatori venhau, vakashanda nevatori venhau, uye vakashandirwa nevatori venhau pavakatanga bepanhau ravo, nokudaro vanofara kuti vapiwa basa ravanonzwisisa zvikuru.
VaParadza vati pane zvizhinji zvavanoda kubatsira kugadzirisa nekukurumidza, zvinosanganisa kuumbwa kweMedia Council, bhiri reMedia Practitioners Bill, iro vanoti rine basa zvikuru sezvo richichengetedza vatori venhau nemashandiro avo, uye kugadzirisa nyaya dzemadandemutande senzira yekusimudzira mabasa evatori venhau